သားကြောဖြတ်ခြင်း - Thiloyarmay ׀ ဖိုမ ဆက်ဆံရေးနှင့် မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ မေးလိုရာ
Thiloyarmay ׀ ဖိုမ ဆက်ဆံရေးနှင့် မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ မေးလိုရာ > ကျွန်မတို့ကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ် > သားကြောဖြတ်ခြင်း
မျိုးပွားနိုင်မှုစွမ်းရည်ကိုအပြည့်အဝဖယ်ထုတ်လိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်တယ်။ဒီနည်းဟာရာသက်ပန်ကိုယ်ဝန်တားဆီးနည်းဖြစ်ပြီးကလေးလုံးဝမလိုချင်တဲ့သူတွေ(သို့မဟုတ်)ကလေးထပ်မလိုချင်တော့တဲ့သူတွေအတွက်သင့်တော်ပါတယ်။သားကြောဖြတ်နည်းတွေကအမျိုးသားအမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံး အတွက်ရရှိနိုင်ပြီးမတူညီတဲ့နည်းလမ်းအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အားလုံးမှာကလေးမရရှိတဲ့အဆုံးသတ်ကတော့တူကြပါတယ်။အကျိုးထိရောက်တဲ့ကြာရှည်ကိုယ်ဝန်တားဆီးနည်းတွေ ရှိပေမဲ့ကလေးပြန်ရနိုင်ပါတယ်။ရာသက်ပန်ကလေးမရတော့အောင်သင့်ရဲ့မျိုးပွားစွမ်းရည်ကိုလုံးဝဖယ်ရှားဖို့သေချာတယ်ဆိုရင်သားကြောဖြတ်ခြင်းကသင့်အတွက်နည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ။
သားကြောဖြတ်တာကိုမဆုံးဖြတ်ခင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကန့်သတ်ထားတဲ့ရွေးချယ်သိသင့်တဲ့ဥပဒေတွေရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာသားကြောဖြတ်ခြင်းကိုအလွန်တားမြစ်ထားပါတယ်။အမျိုးသား သားကြောဖြတ်ခြင်းကဥပဒေကိုဆန့်ကျင်ပြီးအမျိုးသမီးသားကြောဖြတ်တာကဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့သဘောတူညီချက်ရှိရပါမယ်။သင်ကအမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ပြီး ဒီနည်းလမ်းကိုစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်ကသင့်အတွက်သားကြောဖြတ်နည်းလမ်းကိုဘုတ်အဖွဲ့သို့အဆိုပြု တင်သွင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ (http://www.your-life.com/en/contraception-methods/other-methods/sterilization/
Dr. Mi Mi Ko)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ သားကြောဖြတ်နည်းကတော့ သားဥပြွန်ကို ချည်ခြင်း ဖြတ်တောက်ခြင်းနဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖယ်ရှားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းကို ဝမ်းဗိုက်နံရံအသေးစားခွဲစိတ်မှု လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။
ဝမ်းဗိုက်နံရံအသေးစားခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ရာမှာ သားအိမ်ပြွန်ကို ချည်နှောင်ဖြတ်တောက်ရန် ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ အရေပြားအရေးအကြောင်းအတိုင်း ခွဲစိတ်ဓါးဖြင့် ခွဲစိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ခွဲစတ်ရာမှာ နာကျင်မှု မရှိအောင် ကျောရိုးတွင်းထိုးသွင်းတဲ့ထုံဆေးကို အသုံးပြုခွဲစိတ်ရမှာဖြစ်ပြီး ဆေးရုံမှာ (၃) ရက်ကနေ (၅) ရက်အထိ နေရတတ်ပါတယ်။
Sources: Dr Mie Mie Ko, Family Physician
အမျိုးသား သားကြောဖြတ်ခြင်းနဲ့အမျိုးသမီး သားကြောဖြတ်ခြင်းရဲ့ကွာခြားမှုကဘာလဲ?
အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကတော့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့သားဥပြွန်နှစ်ခုကိုပိတ်လိုက်တဲ့နည်းဖြစ်ပြီး ကိုယ်ဝန်မရရှိနိုင်ပါဘူး။(သားဥပြွန်ဆိုတာသားဥနဲ့သုတ်ကောင်တွေတွေ့ဆုံတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ သားဥနဲ့သုတ်ကောင်မတွေ့ရင်ကလေးမရနိုင်ပါဘူး။)အမျိုးသားတွေအနေနဲ့သားကြောဖြတ်တယ် ဆိုတာယောင်္ကျားတစ်ယောက်ရဲ့သုတ်ကောင်တွေသယ်ဆောင်လာတဲ့ပြွန်ကိုပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားတွေအတွက်ခွဲစိတ်ရတဲ့သားကြောဖြတ်နည်းကမိနစ်၂၀လောက်အချိန်ယူရပါတယ်။မေ့ဆေးထိုးဖို့လိုအပ်ပြီးဆရာဝန်ကကပ်ပယ်အိတ်နေရာကိုခွဲစိတ်မှုလုပ်ပြီးပြွန်တွေကိုပိတ်လိုက်မှသာအဖြူ ရောင်အရည်ကြည်တွေထဲကသုတ်ကောင်တွေထွက်သွားပါတယ်။သုတ်ကောင်တွေမရှိရင်ကိုယ်ဝန်မဆောင်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အမျိုးသား သားကြောဖြတ်ခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်ပါတယ်။အမျိုးသားဖြစ်တဲ့သင့်အနေနဲ့ ဒီနည်းကိုရှာဖွေနေရင်ပြည်ပနိုင်ငံခြားသို့သွားပါ။ (http://bedsider.org/methods/sterilization#side_effects_tab)
အမျိုးသားအနေနဲ့ကပ်ပယ်အိတ်ဟာဖူးရောင်ပြီးနာကျင်ပါမယ်။အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးသောက်ခြင်းအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့အတွင်းခံဘောင်းဘီအကျပ်ဝတ်ဆင်ခြင်းတွေဟာကပ်ပယ်အိတ်သက်သာဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေပြီးပထမဆုံးရက်အနည်းငယ်အတွင်းနေ့ရောညပါသက်တောင့်သက်သာ မရှိတာကိုလျော့ချပေးပါတယ်။ကပ်ပယ်အိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အဖွင့်နေရာလေးဟာအလွန်သေးငယ်ပြီးချုပ်ရာမလိုပါဘူး။လုပ်မယ်ဆိုရင်အရေပြားထဲစိမ့်ဝင်အသားကျတဲ့ချုပ်နည်းသို့မဟုတ်ခွဲစိတ်ခန်းသုံးတိပ်တွေကိုအသုံးပြုရပါမယ်။သားကြောဖြတ်တာက၁၀၁၅မိနစ်လောက်အချိန်ယူရပြီးဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အထွေထွေ ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်လို့ရတဲ့နေရာတွေမှာပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
နာကျင်ပါတယ်။ နာကျင်နိုင်ချေရှိပါတယ်။ နာကျင်မှုရပ်တန့်သွားစေဖို့အတွက် အမျိုးသမီးတွေဟာ ကျောရိုးအတွင်းထိုးသွင်းရတဲ့ ထုံဆေးထိုးနိုင်ပြီး အထူးအခြေအနေတွေကလွဲလို့ နိုးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးသူက သူ့ရဲ့သားအိမ်နဲ့သားအိမ်ပြွန်တွေကို ထုတ်လိုက်ပြီလို့ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်နေတာကြောင့် နေရခက်နိုင်ပေမယ့် နာကျင်မှုတော့မရှိပါ။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ခွဲစိတ်ပြီး (၂) ရက်မှ (၃) ရက်အထိ နာကျင်မှုခံစားရနိုင်ပြီး အားနည်းနေနိုင်ပေမယ့် သိပ်မကြာမီမှာ အားပြန်ပြည့်လာမှာပါ။
Sources: Dr. Mie Mie Ko, Family Physician
အမျိုးသမီးသားကြောဖြတ်ခြင်းဟာ ပြန်ဆက်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါက ဖြတ်ထားတဲ့ပြွန်အစွန်းတွေကို ပြန်ဆက်တာတွေပါဝင်တဲ့ ရှုပ်ထွေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သားကြောဖြတ်ခြင်းကနေ ပြန်ဆက်ပီးနောက်မှာ မျိုးအောင်လာမလား (ကိုယ်ဝန်ပြန်ဆောင်နိုင်မလား) ဆိုတာတော့ အာမခံချက်မရှိပါဘူး။ အမျိုးသမီးများ သားကြောဖြတ်ပြီး ပြန်ဆက်တာမှာ ပြန်လည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် အောင်မြင်နိုင်ချေကတော့ အတော်ကိုကွဲပြားနိုင်ပြီး အသက်အရွယ်နဲ့ ခွဲစိတ်ရာတွင် အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်း စတဲ့ အချက်တွေအပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်။
အမျိုးသား သားကြောဖြတ်ခြင်းနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး ပြင်းထန်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေ ရှိပါသလား?
သုတေသနစစ်ဆေးချက်တွေအရ အမျိုးသား သားကြောဖြတ်ခြင်းကြောင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကြာရှည်ခံစားရတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေ မရှိပါဘူး။
အခါအားလျော်စွာ တချို့ အမျိုးသားတွေမှာ သွေးထွက်ခြင်း၊ ဖူးရောင်ခြင်းနဲ့ ပိုးဝင်တာတွေရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုအခါမျိုးမှာ တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး ဆရာဝန်နဲ့ သွားရောက်ပြသပါ။ တခါတရံ သုက်ရည်တွေက ဆီးပြွန်ထဲကနေ ယိုစိမ့်ထွက်ကျလာပြီး အနားတဝိုက် တစ်သျှူးတွေထဲမှာ စုဆောင်းထားပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရင် ချက်ချင်း ဖူးရောင်လာပြီး နာကျင်တာက ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ် (သို့) လ အနည်းငယ်ကြာပါတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါ ကုသလို့ရပါတယ်။
အမျိုးသားအနည်းစုမှာ ဝှေးစေ့၊ ကပ်ပယ်အိတ်၊ ယောက်ျားလိင်တံ၊ ဝမ်းဗိုက်အောက်ခြေပိုင်းတွေမှာ နာကျင်တာတွေ ဆက်လက်ခံစားရပါတယ်။ ဒါကို နာတာရှည် အမျိုးသားသားကြောဖြတ်ပြီး နာကျင်မှုလို့ခေါ်ပါတယ်။ ဆေးဝါးကုသမှုတွေက နာကျင်မှုကို သက်သာစေတဲ့ နေရာမှာ ထိရောက်မှုရှိပြီး အချို့ အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ ထပ်မံ ခွဲစိတ်မှုတွေ လိုအပ်ပါတယ်။အမြဲတမ်းတော့ သက်သာတယ်လို့တော့ မရှိပါဘူး။
သားကြောဖြတ်ထားတဲ့ အမျိုးသားအများစုမှာ ပြည်တွင်းဖြစ် မေ့ဆေးအသုံးပြုပြီး အလွန်ရှားတဲ့ အထွေထွေသုံး မေ့ဆေး၊ထုံဆေးလည်း သုံးပါတယ်။အထွေထွေသုံး မေ့ဆေး၊ထုံဆေးတွေ သုံးတဲ့ခွဲစိတ်မှုတွေမှာ ဆိုးကျိူးလေးတွေနည်းနည်းရှိပြီး ပြင်းထန်ဆိုးရွားတဲ့ ပြဿနာတွေကတော့ ရှားပါတယ်။
သားကြောဖြတ်ဖို့အောက်ပါအခြေအနေတွေထဲက တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုတဲ့အခြေနေတွေ ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
–နှလုံးရောဂါကင်ဆာ(သို့မဟုတ်)အခြားကျန်းမာရေးအခြေအနေရှိရပါမယ်။(Dr. Mi Mi Ko)
မြန်မာနိုင်ငံမှာသားကြောဖြတ်ခြင်းကိုအများပိုင်ပြည့်သူ့ဆေးရုံတွေမှာအခမဲ့လုပ်ပေးပါတယ်။ (Dr. Mi Mi Ko)
သင့်ကိုမေ့ဆေးပေးပါလိမ့်မယ်။ပြွန်ဆီကိုရောက်ဖို့ဆရာဝန်အနေနဲ့ခွဲစိတ်ခန်းသုံးဓါး မလိုတဲ့နည်းအပေါက်ငယ်(သို့မဟုတ်)ကပ်ပယ်အိတ်အရေပြားပေါ်မှာဖြတ်ရာအသေးလေးလုပ်ပေးလိမ့်မယ်။အဲဒီနောက်ဆရာဝန်ကပြွန်တွေကိုဖြတ်ပြီးအစွန်းနှစ်ဖက်ကိုချည်ပါတယ်သို့မဟုတ်အပူနဲ့ ပိတ်လိုက်ပါတယ်။တခါတရံဖြတ်တဲ့အခါပြွန်တွေရဲ့အပိုင်းအစလေးတခုကိုဖယ်ထုတ်ရပါတယ်။(http://www.fpa.org.uk/contraception-help/sterilisation-male-and-female#rR3umK6ArJqA4LKF.99)
အမျိုးသားသားကြောဖြတ်ခြင်းကြောင့် အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆို်င်ရာစွမ်းရည် (သို့) စိတ်ဆန္ဒကို ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသလား။
အမျိုးသားသားကြောဖြတ်ခြင်းကြောင့် သူတို့ရဲ့တက်စရိုစထရုန်းအဆင့်နိမ့်သွားမှာနဲ့ သူတို့ရဲ့လိင်အင်္ဂါသေးငယ်သွားမှာ (သို့) သူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအပေါ်ထိခိုက်မှာကို အမျိုးသားအများစုက စိုးရိမ်ကြပါတယ်။ စိုးရိမ်သလိုတွေ ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးသားသားကြောဖြတ်ခြင်းဟာ သန္ဓေတည်နိုင်စွမ်းကို ထောင်မတ်နိုင်စွမ်းအားထိန်းထားနိုင်ခြင်း စတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှု အပြင် တခြားသော ကိစ္စရပ်တွေအပေါ် သက်ရောက်မှုမရှိပါဘူး။